Kungani inja is iluma, ngiyazi ingoma yezingane. Yiqiniso, kuphela kusuka ukuphila inja. Kodwa kunezinye izici ukuthi balolonge bomoya ezimbi umngane zemilenze emine, futhi kwasekuqaleni - ukuntuleka kwemfundo efanele. Futhi umuntu akufanele sikhohlwe - zohlobo izici. Nquma ukuthi iziphi kunazo inja enolaka emhlabeni, ngeke kube lula. Kuye wazama ukuthola izilinganiso eziningi, kodwa ngamunye ukhiqiza izibalo zayo Imiphumela akuzona efanayo kwabanye. Lokhu kuyaqondakala, izifundo ezinjalo, naphezu ukujula sobala iyohlale esekelwe nakho ezithile zomphakathi futhi liqukethe elementi luhlangotsi.
Nokho uzame. Izilinganiso zisekelwe ucwaningo phakathi abavamile inja kubanikazi izingqapheli nje ngaphandle uyavuma ukuthi izinja okubi kakhulu akufani ngempela olukhulu nolwesabekayo. Okuxakayo nje uhlu njalo wahola inja ibudisi - dachshund. Akanayo usayizi umxhwele, umzimba wayo side futhi imilenze iDemo ukukhuluma of okuqondene Norn ukuzingela izinja. It kuvela ukuthi lentela nokungababekezeleli kakhulu abangabazi, futhi ikakhulukazi izinja angaphandle. Nge sebekhathele ukukhonkotha kwazo elikhulu ulungele zokungajahi impi nganoma yisiphi isikhathi.
Kumugqa ofanayo (hleka bihlika!) Little ethangeni inja Chihuahua. Hhayi niqonda sina uvalo wakhe, futhi abaningi basala yenhlwathi amazinyo akhe amancane. Terriers uvale phezulu ezintathu kulolu hlu elihloniphekile "iningi inja enolaka emhlabeni." Bezingosi imfundo, futhi ukuvusa isilo kulezi izingane it is hhayi Kunconywa. By the way, izilwane zingenwa zivuka cishe kunoma iyiphi inja. Abanolwazi inja bokudla bexwayisa ukuthi awukwazi ukubikezela izenzo inja, kungakhathaliseki ukuthi zohlobo ayeyikho.
Manje ngenxa namanye amalungu esizweni inja, emele engozini enkulu ngempela kubantu nasezilwaneni. Kukhona amadwala, lapho priori kulesi sigaba - inja ezinesihluku kakhulu emhlabeni - futhi ngokuvamile kungavunyelwe ukulima ekhaya. indawo Okokuqala kulolu chungechunge njalo kuthatha pit bull terrier. Lena zohlobo lokulwa, okuyinto ekuqaleni ukuthuthukisa ubudlova nokungesabi. Pit Bull akesabi noma ubani nanoma yini. Ngisho nokwazi iqembu, yena akuqinisekile. Uma isilwane uhlaselwe umuntu akazange razozhmet emihlathini yensimbi wabo, kwaze ubulala inyamazane yayo.
Rottweiler - futhi inja wathukuthelela nokuthukuthelela eziqine isazela indawo. Ubizwa sanikwa ukuhlakanipha okusezingeni eliphezulu, kahle amenable nokuqeqeshwa, kodwa kungaphansi kuphela umnikazi walo futhi amalungu omkhaya wakhe, okuyinto uyavuma. Kodwa ngaleso izinsolo kancane ingozi kumalungu 'umhlambi "noma izimangalo yomunye ku insimu yalo uma inja yena, ngokwakhe unika izwi" ubuso ". Iron emhlathini - kumayelana kuye, futhi.
Phakathi izinja eziyingozi kakhulu esikhulu ngokuthi Central umalusi Asian inja - Alabai. Ingabe A devotee wabanikazi futhi insimu yabo inja enkulu, okuyinto akufanele bayazidlalela, uzama ukuphulula naye, ngisho noma yena wathatha isivakashi nazo zonke izihambi. Lokhu inja ezaziphila ngokufuya futhi niqaphe isazela futhi aphethe endaweni kuba ineradicable. Kwakuba nezikhathi lapho uma uzama ukumethusa alabai baphuthuma amalungu omkhaya aphethe.
Uhlu eqhubekile. Inja bokudla uphendula kanjalo lo mbuzo: "Inja ezinesihluku kakhulu emhlabeni - kuba inja eyihlongandlebe." Baqinisile, kodwa ngokwengxenye kuphela. Nge umngane yabantu emihle kungcono ukuba benza amahlaya, ikakhulukazi uma isilwane engajwayelekile.